कांग्रेसबाट देउवा सरकारमा ३ जना मन्त्रि बन्दै, कसलाई कुन पद ? – GALAXY
कांग्रेसबाट देउवा सरकारमा ३ जना मन्त्रि बन्दै, कसलाई कुन पद ?
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाइसकेपछि अब सबैको ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित भएको छ ।हाल मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यीय रहेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल रहेकी छन् ।
अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रका गुट मिलाउन सकस परेको छ । कांग्रेसमा आफूसहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुट रहेको छ ।नेपाली कांग्रेसले थप ४ मन्त्रालय पाउने सम्भावना देखिएको छ ।
जसमा आफ्ना गुटकासँगै पौडेल र सिटौला पक्षलाई मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट डा. नारायण खड्का, डा. डिला संग्रौला, मीन विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल, किशोरसिंह राठौर, भरत शाह आकांक्षी देखिएका छन् ।
यीमध्ये संग्रौला, खड्का र विश्वकर्माको सम्भावना बढी रहेको छ । विश्वकर्मा मन्त्री नभए देउवाले विश्वकर्मालाई कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनाउन सक्ने देखिएको छ ।संस्थापनइतर पक्षले महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालामध्ये १ जनालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यीमध्ये सुजाताको सम्भावना बढी छ । उनी परराष्ट्रमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ ।पौडेल पक्षबाट डा. मीनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडू समेत मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेको छन् ।सिटौला पक्षबाट सांसदहरु गगनकुमार थापा, भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरीको नाम चर्चामा रहेको छ । सिटौलाले प्रधान र चौधरीमध्ये १ सांसदलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् तर उनले कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् ।